बलात्कार किन बढ्दै छ ? किन सार्वजनिक हुन थाल्यो डरलाग्दा तथ्यांक? जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
बलात्कार किन बढ्दै छ ? किन सार्वजनिक हुन थाल्यो डरलाग्दा तथ्यांक?
नवराज पराजुली/ चैत, काठमाडौं । मुलुकमा बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको बिगबिगीमा ट्रेण्ड बढिरहँदा केही साता अघि मात्रै बारामा बलात्कृत भएकी बालिका पुजा साहको घटना सेलाउन नपाउँदै ललितपुरमा नातामा मामा पर्नेले सात वर्षकी एक बालिकालाई बलात्कार गरे ।
अभियोग सार्वजनिक भएपछि ती बालिका भन्दा अगाडि उनकै दिदीलाई पनि अभियुक्तले बलात्कार गरेको खुलासा गरेका थिए । मुलुकमा पछिल्लो समय महिला र खासगरी बालिकामाथि बलात्कारका घटना सार्वजनिक हुँदै आएका छन् ।
केही समय यता सञ्चारमाध्यममा बलात्कारका घटनाले मात्र स्थान पाउँदै आएकोले उनीहरूमाथि बलात्कारका शृङ्खला बढ्दै गइरहेको स्पष्ट छ । साता अघि मात्रा काठमाडौंको अति व्यस्त वसन्तपुरमा ट्यसुन पढीरहेकी छात्रामाथि एसिड आक्रमण भएको थियो । राजधानीमै छात्रा असुरक्षित छन्, घरमै बालिका असुरक्षित छन् भने बलात्कारीको फन्दाबाट को बच्न सक्ला त?
यसै सातामात्र प्रवेशिका परीक्षा दिने तयारीमा रहेकी कञ्चनपुरमा एक किशोरी सामूहिक बलात्कारमा परिन् । रातको समयमा बलात्कार भएकाले पीडितले पीडकलाई नचिनेको भन्दै केही संदिग्ध व्यक्तिलाई पक्राउ परे पनि पछि एकजनाबाहेक अरूलाई छाडियो ।
वसन्तपुर एसिड आक्रमणकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । बलात्कारका मुद्धामा बलत्कारीलाई सफाई ज्यादा, सजाय कम हुने गरेको खबर सञ्चारमाध्यममा नआईरहेका भने बिल्कुलै होईनन् ।
धादिङको एक गाउँमा बालिका बलात्कृत भईन् । बाख्रा चराउन गएकी बालिका अबेर सम्म नफर्किए पछि बलात्कृत भएको घटना सार्वजनिक भएको थियो । बालिकाले बताए बमोजिमकाको हुलियामा बलात्कारी पक्राउ परे ।
पुजा बोहरा तस्वीर /कान्तिपुर
विद्यमान कानुनअनुसार १० वर्षमुनिका बालिकालाई बलात्कार गरेमा १० देखि १५ वर्षको कैद हुने व्यवस्था छ । यदि सो कैद भुक्तानी गरी पीडक आएको अवस्थामा बालिका मात्र १७ वर्षको हुने भएकाले त्यही पीडकलाई आफ्नै आँखा अगाडि देखिरहँदा उनको मानसिक अवस्था कस्तो होला?
बैतडीकी पुजा बोहरा पनि आज भन्दा तीन वर्ष अगाडि २०६८ सालको प्रवेशिका परीक्षा तयारी दौरान बलात्कारको शिकार भईन् । बलात्कारीलाई हदैसम्माको कारवाहीको माग गर्दै कानुन मन्त्री नरहरी आचार्यलाई पत्र लेखिन् । बोहराले ‘अब बन्ने ऐनमा बलात्कारीलाई फाँसीको सजायको व्यवस्था गरी बलात्कृत छोरीहरूको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ भन्ने म जोडदार माग गर्छु’ भन्दै लेखेकिथिईन् ।
दाङमा केही समयअघि मात्र २० वर्षीया उषा केसी र १९ वर्षकी अनिता भण्डारी मृत अवस्थामा फेला परे । १९ दिनअघि हराएका उनीहरूको शव क्षतविक्षत अवस्थामा भेटिए पनि प्रहरीले विष खाएको भनी घटनालाई सामसुम पारेका छन् । मृतक केसीका बुबा अञ्चल केसीले माघ ५ गतेदेखि हराएका छोरीहरूको शव २३ गते भेटियो । छोरीको शवको दाहिने हातको तीन वटा औँला छैन र खुट्टामा समेत किला ठोकिएको थियो भने शरीरमा तेजाब खन्याइएको अवस्थामा थियो । उनले भने, “मैले न्याय पाउन सकिन, अनिताले आफ्नो कापीमा म मरेमा विपिन सर र जगदीश सरलाई पक्रनु भनी लेखिएको लिखतसमेत भेटायौँ, तर प्रहरीले ती प्रमाणलाई वास्ता गरेन । अहिले पनि आरोपी खुलेआम हिँडिरहेका छन् । मैले किटानी जाहेरी दिँदा आरोपीले धम्की दिइरहेको छ ।” आरोपी मृतकहरू पढ्ने कलेजका शिक्षक रहेको उनले बताए । आफ्नो एउटैमात्र छोरी गुमाएको पीडामा रहेका केसी जसरी पनि राज्यले आफूलाई न्याय दिलाउनुपर्यो भन्छन् ।
भारतका उत्तर प्रदेशको कुशीनगरमा एक किशोरीलाई विगत ४ महिनामा २५ पटक बलात्कार गरिएको घटना बाहिर आएको छ । उनका बाबुले ती १८ वर्षीया किशोरीलाई खेतमा मल छर्न पठाएका थिए । ती किशोरी गाउँकै युवकद्वाराअपहरण गरी उनको पटक पटक बलात्कार गरे र बेलुका गाउँको नजिकै छाडिदिए । किशोरीले घटना साथीलाई सार्वजनिक गरिन् । साथीका काकाले सहयोग गर्ने भन्दै अमानवीय हत्कण्डा मच्चाउन थाले । यसैक्रममा ती किशोरी ६ जनाबाट २५ पटक बलात्कृत भईन् । बलात्कारीहरु खुलेआम हिँडिरहेका छन् । घटनालाई कसरी अनुसन्धान र कारबाही गर्ने भन्दै प्रहरी पनि अलमल्लमा पर्यो ।
कानुनमा कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई निजको मञ्जुरी लिई वा नलिई करणी गरेमा निजले जबर्जस्ती करणीको अपराध गरेको मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा करणी भएको ३५ दिनभित्र नालिस दिनुपर्छ । १० वर्ष वा सोभन्दा बढी १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए आठदेखि बाह्र वर्षसम्म, १४ वर्ष वा सोभन्दा बढी १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए छ वर्षदेखि १० वर्षसम्म, १६ वर्ष वा सोभन्दा बढी २० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए पाँच वर्षदेखि आठ वर्षसम्म, २० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरकी महिला भए पाँचदेखि सात वर्षसम्म र लोग्नेले स्वास्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।
प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार १८ वर्षको बलात्कार घटना हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ मा ११२ वटा घटना थिए भने २०७१/०७२ मा ९१२ । पछिल्लो २० वर्षमा यो संख्या ८००ले बढेको छ ।
“अपराध भइसकेपछि कार्बाही गर्नेभन्दा पनि अपराध नहुने स्थिति सिर्जना गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्छ ।” महिलालाई अधिकार नै कम रहेको बताउँदै देवकोटाले भएका अधिकार प्रयोग गर्न दिने हो भने महिलामाथि हुने हिंसा न्यून हुने तर्क बताए । त्यसो त विकसित मुलुक पनि महिला हिंसाका घटना उत्तिकै सार्वजनिक पाइन्छ । सन् २०१४ मा बढी महिला हिंसा भएका मुलुकको दस सूचीमा अमेरिका पहिलो सूचीमा परेको थियो । गत वर्ष अमेरिकामा ८९ हजार २४१ महिला हिंसामा परेका थिए । यस्तै दोस्रोमा भारत परेको छ, जहाँ २१ हजार ३९७ महिला हिंसामा परेका थिए भने तेस्रोमा बेलायतमा १५ हजार ८४ महिलामाथि हिंसाका घटना सार्वजनिक भएका थिए ।
बलात्कारको लागि कडा कानुनी कारवाही त्यतिबेला मात्र सफल हुन्छ जहाँ दण्ड सहिंता, प्रक्रिया संहिताको साथ साथै आचार संहिता मात्र नभएर जबर्जस्ति फसाउने नियत भएका महिला पुरुष दुबैलाई एकै किसिमको सजाय हुनुपर्छ।मुलुकी ऐनमा परिमार्जन हैन, परिवर्तनको जरुरी छ । संशोधनमात्र हैन, संवेदनायुक्त हुनु जरुरी छ ।